पत्रकार खतिवडाको खुलापत्रलाई नियाल्दा | चितवन पोष्ट दैनिक
पत्रकार खतिवडाको खुलापत्रलाई नियाल्दा
२०७० माघ ४, शनिबार ०३:३४ गते
चितवनका युवा पत्रकार राधेश्याम खतिवडाले लेखेको लेखहरुको सँगालो हो, ‘खुलापत्र’ । पुस्तकको शीर्षकले नै अर्थ प्रस्टिएको छ, कसैलाई खुला रुपमा दिइएको पत्र । यसलाई अन्य पुस्तकको दाँजोमा राख्नु युक्तिसंगत नहोला । तर, ‘खुलापत्र’ अन्य पुस्तकभन्दा कम मूल्यवान् भने पक्कै छैन । आदर्शका कुरा सिउने नेपाली पुस्तकको भेलमा ‘खुलापत्र’ले आफ्नो छुट्टै स्थान बनाएको छ । चितवनको पेरिफेरिमा त्यसमाथि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई सरल र सरस भाषामा लेखिएको पुस्तकले नयाँ छाप दिएको छ । यो पुस्तकले चितवनमा विभिन्न निकायमा हाल भैरहेका गतिविधिहरुलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
१२७ पृष्ठमा २९ वटा लेख समावेश छ भने अन्त्यमा लेखसम्बन्धी आएका केही प्रतिक्रियाहरु राखिएका छन् । चितवनको स्थानीय पत्रिका चितवन पोष्टमा प्रकाशित लेखलाई किताबको आकार दिएका छन्, पत्रकार खतिवडाले । सुरूमा सोही पत्रिकाका सम्पादकको भनाइबाट विचार प्रवाह गरिएको छ । उनका अधिकांश लेखमा समाजका विसंगतिप्रति प्रहार गर्दै प्रतिप्रश्न गरिएको छ । उनको पहिलो प्रयास साँच्चै आफैँमा मह¤वपूर्ण छ ।
सुरूमा उनले आफ्नै पाठकलाई खुलापत्रसमेत दिएका छन् । हामी सबैले आफू जहाँ छौँ, त्यहीँको कुरा गर्नुपर्छ, टोलमा बसेर राष्ट्रनिर्माणको कुरा गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । उनको भाव पहिलो आफू, घर, टोल, छिमेकबाटै परिवर्तनका कुरा गर्नुपर्नेमा जोड छ । लेखकले आफूविरूद्ध घटेका घटनाहरुको उजागर गर्दै उनले आफ्नो कलम नभाँचिएको, बरू तिखारिँदै गएको बताएका छन् । त्यसैको प्रतिफल हो, खुलापत्र । अर्काे पानामा आफ्ना सहयोगी शुभचिन्तकहरुप्रति आभार प्रकट गरेर उनले आफ्ना केही भनाइ राखेका छन् ।
आफ्नो खोपडीले भ्याएसम्मका विषय समावेश गरेका उनले पुस्तकलाई धोको पूरा गरेको भन्दै पुस्तक प्रकाशनले आत्मसन्तुष्टि मिलेको संकेत गरेका छन् । त्यसमाथि चर्चा थपिनु उनका लागि हौसला हुने छ । घरमा हुनेले घरका कुरा छाडेर देशका कुरा गर्ने जमात देख्दा उनलाई दिग्दार लागेर आफ्नै समाज सुधार्नका लागि पनि पुस्तक निकालेको उनका कतिपय भनाइले पुष्टि गर्छ ।
भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सहयोग नगर्नेहरुप्रति उनले पुस्तक समर्पित गरेकाले पनि पुस्तकका विषयहरुले भ्रष्ट प्रवृत्तिप्रति प्रहार गरेकोमा दुई मत छैन ।
पत्रकार खतिवडाले पहिलो प्राथमिकता एम्बुलेन्सलाई दिएका छन् । १ देखि ५ पृष्ठसम्म लेखिएको ‘एम्बुलेन्सवालालाई खुलापत्र’ आफैँमा मह¤वपूर्ण छ । आकस्मिक सेवा भएकैले उनले पहिलो स्थानमा यो खुलापत्र छानेको हुनुपर्छ । तर, उनको लेखले एम्बुलेन्स सञ्चालनले गर्नैपर्ने तर गर्दै नगरेको प्रवृत्तिलाई प्रहार गरेका छन् । जति–जति पछिका दिन भए, त्यति–त्यति संवेदनशील क्षेत्रमा गुनासा बढ्दै गएको छ । आकस्मिक सेवाका नाममा जनता ठगिँदै गएको उनको लेख पढेपछि प्रस्टिन्छ । एम्बुलेन्स सञ्चालन नीतिलाई सञ्चालकले काँच्चै खाइदिएका छन् । नेपालमा नीति–नियम कार्यान्वयन नै हुँदैनन् कि भन्ने पाठकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरेकाले लेखप्रति कसैले औँला ढड्याउने ठाउँ देखिँदैन । अस्पतालको सहर भनेर चर्चा गरिँदै आएको चितवनमा क, ख वर्गका एम्बुलेन्स नहुनु विडम्बना हो । लेख पढ्दा पाठकमा यस्तो पनि एम्बुलेन्स सेवा भनेर नीति कार्यान्वयन गराउने निकायप्रति पनि हेयको भाव जागृत गराउँछ ।
पृष्ठ ६–८ मा क्याम्पसप्रमुखलाई खुलापत्र दिइएको छ । पाठकहरुलाई दिइएको खुलापत्रका अनुसार अभिमतपत्रको कर्नर किकमा लेखिएको एउटा सामग्रीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसबेला सम्भवतः कन्या क्याम्पसभित्रका विकृतिलाई उनले छपाएका थिए ।
दोस्रो लेखको अपेक्षा क्याम्पसको हाता सफा राख्नुपर्छ भन्ने नै हो । सामान्य तर मह¤वपूर्ण कुरा लेखमा उठाइएको छ । यहाँ कुनै क्याम्पसलाई तोकिएको छैन । प्रवृत्तिलाई रोक्न उनले अनुरोध गरेका छन् । उक्त लेख रहेको पुष्ठ ७ को तेस्रो अनुच्छेदमा लेखिएका विषयले पाठकलाई एक पटक हँसाउँछ अनि सोच्न बाध्य बनाउँछ । पिसाब फेर्न गएका लेखक पिसाब नै नफेरी उत्सुकता बोेकेर दायाँ र बायाँ हेर्दा उनलाई केही सार्वजनिक मह¤वकै विषय छ कि झैँ लागेको हुनुपर्छ । मेरो ख्यालमा प्राध्यापकहरुलाई शरम लाख्न सक्छ पढ्दा । कक्षा कोठामा लेखिएका सामग्री, भित्तामा टाँसिएका अश्लीलता मात्रै छोपिदिनोस् न क्याम्पस प्रमुख ज्यू, बस् उनले यत्ति भनेका छन् ।
त्यसपछि उनी सरकारी कार्यालयमा फड्किएका छन् । ‘तपाईका कार्यालयका कर्मचारीहरु किन नागरिकप्रति हाँसेर, खुसी भएर काम गर्न मान्दैनन् ? किन डराउनु पर्ने नागरिक ? किन ढिला हुने काम ?’ त्यो लेखको सारांश भन्दा पनि हुन्छ, पुष्ठ ११ को तेस्रो अनुच्छेदमा लेखिएका यी कुराहरु । कर्मचारीका लापरबाही, पैसाको चलखेल, सेवासुविधाका विषय पढ्दा पाठकले कुनै दिन सरकारी कार्यालयमा पुग्दा आफूले पाएको हन्डर सम्झन बाध्य हुन्छन् । उनले आगामी दिनमा बसुन्जेलको भावना त्यागी केही गरेर देखाउन सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् ।
चौँथो लेख पत्रकार सम्मेलनको छ । विज्ञापन र पत्रकार सम्मेलन खुट्याउन नै लेखकलाई धौधौ परेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा पुग्दा विज्ञापन शाखा पुगेजस्तो भान उनलाई परेको छ । उनले आफैँ पनि दोषीको भागिदारका रुपमा समेत उभ्याएका छन् । जुनसुकै विषय पनि पत्रकार सम्मेलन बनाइनु कत्तिको जायज हो ? पत्रकार सम्मेलनको पनि आफ्नो दायरा त होला ? यी प्रश्न उनले ठड्याएका छन् । १३ पृष्ठको अन्तिममा लेखिएको छ– ‘पछिल्लो समयमा निकै प्रायोजित हिसाबले आफू र आफ्नो संस्थाको प्रचार गर्ने हिसाबले पत्रकार सम्मेलन हुँदै आएको छ ।’ पढ्ने पत्रकारलाई यो लेखले गम्भीर बनाउँछ नै ।
सुरूमा आफ्नै पुस्तकका पाठकलाई खुलापत्र दिएका उनले आमपाठकलाई पुनः खुलापत्रसमेत लेख्न भ्याएका छन् । यो लेखको उनको सार भनेको पाठकले पत्रपत्रिका किनेर पढिदियोस् भन्ने हो । तर, आफूले पनि पछि मात्रै पत्रिका किनेर पढ्नुपर्छ भनेर थाहा पाएको भन्दै आफ्नो कमजोरी पनि देखाउनुले पत्रकार खतिवडाको चरित्र सफा भएको प्रस्टिन्छ । चितवनका सबै पत्रपत्रिका किन्दा ६०८ रूपैयाँ पर्छ भनेर निक्र्यौल निकाल्न पनि लेखकलाई केही समय पक्कै घोत्लिनु परेकै होला । जे होस्, तापनि पत्रिका मागेर होइन किनेर पढौँ भन्ने सन्देश पाठकलाई दिएका छन् । यो एउटा असल संस्कृतिको विकास पनि हो ।
छैटौँ लेख आन्दोलन र पत्रकार छ । विभिन्न समयका आन्दोलन र पत्रकारले दुई वर्षमा भोगेका विषय यसमा छ । कुन पत्रकारलाई कहाँ, के भएको थियो भन्ने छर्लङ्ग पारिएको छ । तथ्यांक हेर्न सहज छ । अन्त्यमा जिल्लाका सबै सञ्चारमाध्यमलाई महासंघले जारी गरेको निर्देशिकासमेत समावेश हुनुले लेख अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । २४ पृष्ठमा रहेको लेखको अन्त्यमा एउटा गम्भीर विषय उठाएका छन् । ‘देशको परिस्थितिअनुसार बहादुरीपूर्ण पत्रकारिता होइन, संयमपूर्ण पत्रकारिता नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।’ यो विषयले पत्रकारलाई प्रशस्त आलोचना गर्ने ठाउँ दिएका छन् । पक्ष–विपक्षबीच वादविवादमा फसाइदिएका छन् लेखकले । यो नेपाली पत्रकारिताको दुर्दशा पनि हुन सक्छ ।
त्यसपछि रत्ननगरवासीलाई खुलापत्र दिँदै उनले नगरपालिकाका गतिविधिमा निगरानी गर्न र सार्वजनिक विषयको खोजी गर्न सुल्झाएका छन् ।
पृष्ठ २८ मा रहेको आठौँ लेख प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जोडिन पुगेको छ । लेखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हरेक सरकारी निकायको गतिविधि कत्तिको नियाल्नुभएको छ भनी प्रश्न राखिएको छ । सीमा समस्या, मतपेटिकाको हरिबिजोग, बडापत्र, सिसी क्यामरा, सडक बत्तीका गम्भीर प्रश्न छन् । अझै सरकारी कार्यालयभित्रै सरकारी कर्मचारीले धूमपान गरेको सेवाग्राहीले देख्नु परेको तीतो यथार्थ पढ्दा प्रजिअलाई कडा प्रहार भएको महसुस हुन्छ ।
नवौँ लेख अस्पताल सञ्चालकका लागि छ । हुन त, लेख अगाडि निस्किएको हो, तर पनि अहिले सरकारी मापदण्ड नपुगेको, नवीकरण नगरिएका चितवनका केही अस्पताल केही समय बन्द पनि गरिएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि पुन खुलेका छन् ।
उनको लेखलाई यसको श्रेय दिँदा फरक पर्दैन । किनकि, सञ्चालकले यो खुलापत्र निस्किएपछि पनि सुधार गर्ने प्रशस्तै समय थियो, तर पेल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले, खुलापत्र आफैँमा मह¤वपूर्ण छ । निर्देशिका अनुसार चलेको छ कि छैन, सेवा शुल्क के छ, सेवा कस्तो छ, चिकित्सकहरु कसरी काम गर्छन्, यसमा सञ्चालकहरुले के गरिरहेका छन् जस्ता प्रश्नसँगै सञ्चालकले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रस्ट्याएका छन्, उनले । एउटा गम्भीर विषय उठान भएको छ लेखमा । पुष्ठ ३६ को सुरूमा भनिएको छ– ‘निजी अस्पतालको भौतिक अवस्थाको कुरा गर्दा चितवनमा मानिस बस्नका लागि बनाइएको घर र वस्तु पाल्न बनाइएको गोठमा अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।’ यो दुर्दशाले चितवन अस्पतालको राजधानी बन्ला ? अब सञ्चालकलाई सोच्न बाध्य पारेको छ ।
अस्पताल सञ्चालकपछि गाडी सञ्चालन (चालक) तर्फ गएका लेखक मानिसको जीवनसँग खेलबाड गर्न नहुने तर्क राखेर गम्भीर मानवीय संवेदना पोखेका छन् । प्रहरीलाई हवाला दिँदै दुर्घटनाको कारण अधिकांशमा चालक नै देखिएका छन् । चालकलाई आफू नि बाँचौँ र अरुलाई पनि बचाऊँ भनेका छन् ।
उनले ११औँ लेख स्थानीय विकास अधिकारीलाई समर्पित गरेका छन् । सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ भन्ने थेगो बोकेका स्थानीय विकास अधिकारीले के–के सपारे र के–के बिगारे, जनताले आफैँ मूल्यांकन गरिरहेका छन् । तर पनि जिल्ला विकास समितिको काम–कारबाहीप्रति लेखले सन्तुष्टि जनाएको छैन । काम सुधार्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसपछि भरतपुर नगरपालिका फर्किएका लेखक रत्ननगरकै जस्तो हरिबिजोग देखाउन पछि परेका छैनन् । एउटा दृष्टान्त दिँदै उनले वधशालाको निर्माणमा विभिन्न अध्ययन भन्दै लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ, तर यो विषयमा किन नबोलेको भन्दै नगरवासीमा प्रतिप्रश्न गरेका छन् । एकातर्फ नगरवासी र अर्काेतर्फ नगरपालिकालाई लेखले जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
उनले अर्काे लेख उच्च मावि सञ्चालकलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन् । शैक्षिक नगरीको चर्चा हुने चितवनका उच्च मावि सञ्चालकलाई पहिलो जिज्ञासा राखिएको छ– ‘शिक्षा व्यापार हो कि सेवा ?’ यसैबाट धेरै कुरा खुलापत्रले सार खिचेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुप्रति उनका थुप्रै गुनासा रहेका छन्, जुन आमपत्रकारका गुनासा हुन् । पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्तिका विषय उस्तै–उस्तै प्रकृतिका छन्, तर सन्दर्भ फरक छ । विज्ञप्तिलाई पनि विज्ञापन गर्ने माध्यम पारिएकोमा उनलाई चित्त दुखेको छ । विभिन्न संघसंस्था हाँक्नेहरुले यो लेख पढ्नैपर्ने देखिन्छ । उनले यहाँ निकै सुझावसमेत दिएका छन् ।
संस्कृत मास्ने क्रान्तिकारीहरुको बुद्धि फिराउन उनले अर्काे लेख कोरेका छन् । मौलिक भाषा संस्कृत मर्दै गएको हो कि भन्ने भान परेको छ उनलाई । टुप्पी पालेका बटुक देख्दा कमैको चासो परेकोमा उनको चिन्ता छ । जे होस्, लेखकोे मौलिक परम्परालाई जोगाऊँ भन्ने सन्देश मह¤वपूर्ण छ ।
१६औँ लेख उनको समग्र लेखको पनि सार र मह¤वपूर्ण पाटोका रुपमा लिन सकिन्छ । उनले भ्रष्टाचारविरूद्धमा पुस्तक नै समर्पित गर्नुले पनि उनको यो लेख गहन छ । ‘भ्रष्टाचारीलाई घरघरबाट बहिष्कार गरौँ’, सुरूमै पाठकको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले आफू आर्थिकमा भ्रष्टाचार गर्दै नगर्ने र अन्यमा केही भ्रष्टाचार गरेको नागरिकका रुपमा उभ्याएका छन्, के भ्रष्टाचार खुलाएका भने छैनन् । भनेका छन्– पहिले भ्रष्टाचारी लुकेर हिँड्थे, अहिले इमानदारहरु लुकेर हिँडेका छन् । स्वाभिमानीहरु अपमानित हुनु परेको र गलत प्रवृत्तिका मानिसहरु सम्मानित भएको हामीले समाजमा देखेकै छौँ । त्यसैलाई लेखले पुष्टि गरिदिएको छ । समग्रमा घरघर, बाबुछोरा, श्रीमान्श्रीमतीबाटै भ्रष्टाचारविरूद्ध लागौँ भन्ने नै उनको सन्देश हो । यसो गरे कसो होला ? भनेर उनले हरेक दिन एउटा कमजोरी हटाउन र एउटा नयाँ काम गर्न सके समाज र राष्ट्र बन्ने उद्देश्यसहित एक जना पत्रकार गुरूको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेका छन् ।
नयाँ प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी आचरण तथा प्रहरीका काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा बोध गराउँदै कमजोरी सुधार्नतर्फ लाग्न भनेका उनले त्यसलगत्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समावेश विषय राखेका छन्, पुस्तकमा । यो पत्रकारहरुले पढ्नैपर्ने लेख छ ।
कभर्ड हलको हरिबिजोक खुलस्त पारेका उनले अर्काे लेखमा समाचारमा चित्त नबुझे के गर्ने ? भन्ने विषयमा जानकारी दिएका छन् । यो आमसमुदायले पढ्नैपर्ने देखिन्छ । किनकि, पत्रकार र पत्रपत्रिकामाथि हुने आक्रमण रोक्न यसले सहयोग पु¥याउँछ ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई खुलापत्र पनि उही उच्च मावि सञ्चालकलाई दिएझैँ छ । लहरो तान्दा पहरो थर्कियो लेख उद्योग व्यवसायीमा समर्पित छ । नारायणगढको लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयले कर छली गरेको भन्ने विषयसँग जोडिएको लेख हो । तत्कालीन समयमा घटनाको प्रत्यक्षदर्शी स्तम्भकारले पनि घटनालाई नजिकबाट नियालेकाले लेख निकै सान्दर्भिक छ भन्न सकिन्छ ।
त्यसपछि बढी फेसबुकमा चर्चा हुने भनेर आरोप खेप्दै आएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीका लागि लेख लेखिएको छ । कुरा हैन, काम गरेर देखाउन उनले शिक्षा अधिकारीलाई भनेका छन् ।
व्यर्थको सम्मान स्वार्थको पुरस्कार भनेर उनले सम्मान गर्ने संस्था र सम्मानित हुनेहरुप्रति पनि लेख लेखेका छन् । सम्मानमा स्वार्थ लुकेको र राजनीतीकरण भएको कुरा उल्लेख गरेर एउटा पाठ उनले सिकाएका छन् ।
पोइल जाने आउनेसँग होसियार भनेर लेखिएको विषयमा मुख्यतः राजनीतिमा पार्टी छाड्ने र फर्कने कुरा जोडेका छन्, लेखकले । साँढेको वीर्यमाथि भ्रष्टाचार कहिलेसम्म भनेर उनले समाचारमूलक लेख लेखेका छन् । अन्य लेखभन्दा अलि गम्भीर र तथ्यांक दिएकाले लेख मह¤वपूर्ण मानिन्छ । त्यसपछि डाक्टरहरुलाई तिखो व्यङ्ग्य गरेका पत्रकार खतिवडाले चिकित्सकलाई ठन्डा दिमागले सोच्न आग्रह पनि गरेका छन् । चिकित्सकका चरित्र लेखमा देखाइएको छ ।
उनको अन्तिम लेख ‘विज्ञापनलाई सुधार गरौँ’ भन्ने छ । विज्ञापनदाताले मिडिया प्रयोग गरी नागरिकलाई ठगिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन भन्दै उनले सचेत गराएका छन् । साथै, बजार कुरुप हुनेदेखि सडक दुर्घटनामा समेत विज्ञापनको हात रहेको उनले खुलाएका छन् । अन्तमा उनले आफ्ना लेखप्रति भएका टीका–टिप्पणी राखेर पुस्तकको बिट मारेका छन् ।
समग्रमा यो पुस्तकले समाजको यथार्थ बस्तुस्थितिको चित्रण गरेको छ । आमजनमानसमा उब्जने प्रश्नहरु र केही ठाउँमा विकल्प र सुधार गर्न सकिने विषय समावेश गरिएको छ । तर, पुस्तकमा प्रशस्त कमी–कमजोरीहरु भने लुकेका छन् ।
पहिलो त, पुस्तक एउटा कोठामा बसेर जे मनमा आयो त्यही (मनगणन्ते) सामग्रीहरु राखिएको त हैन ? भन्ने भान पाठकलाई हुन सक्छ । अधिकांश क्षेत्रमा तथ्यांक नभएकाले पनि विषय उब्जनु सामान्य हो । अझै, पीडितका भनाइहरु राखिएको भए पुस्तक जीवन्त हुनेथियो । तर, कतिपय ठाउँमा उनले राम्रै उपस्थिति देखाएर विश्वास दिलाउने काम भने गरेका छन् । वाक्य गठन र लेखको सिलसिलामा कहीँ, कतै मेल नखाएको पो हो कि भन्ने तर्क राख्ने ठाउँहरु प्रशस्तै दिइएको छ ।
सरल शब्दका कारण पाठकलाई बुझ्न भने कठिनाइ छैन, तैपनि कतिपय लेखमा मनमा आएजति प्रश्न थोपरिएको र गन्थनले भरिएको जस्तो लाग्नाले पढ्दा बोझ महसुस हुने पनि देखिएको छ । समस्या, विकल्प र समाधानका पाटाहरु सिलसिलेवार दिइएको भए बुझ्न सहज हुनेथियो । अन्त्यमा राखिएको प्रतिक्रिया पनि के बनावटी त हैन ? भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिइएको छ, खुलापत्रमा ।
यदि प्रतिक्रिया नै थियो भने पत्रिकामा छापिएका प्रतिक्रिया यहाँ समावेश गर्नु आवश्यक थियो । यद्यपि, एउटा पाठकको हिसाबले हेर्दा अधिकारकर्मी सावित्री सापकोटाले दिएको प्रतिक्रिया मह¤वपूर्ण छ । सचेतनाका लागि लेखिएको पुस्तकमा यस्ता शब्दहरु नराखेकै राम्रो हो । दैवी प्रकोप शब्दलाई ‘विपद्’ शब्द राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रेस्क्रिप्सन, क्यापिटल, डिटेललगायत अंग्रेजी शब्द नेपालीमा लेखिदिएको भए सुनमा सुगन्ध मिल्ने थियो । जे–जस्तो भए पनि उनको यो पहिलो प्रयासप्रति बधाई दिँदै अझै उच्चकोटिको पुस्तक पढ्न पाउने अपेक्षा राख्दछु ।